Taariikhda Taxanaha Golayaasha Sharcidajinta Baarlamaanada Soomaaliya - Awdinle Online
Taariikhda Taxanaha Golayaasha Sharcidajinta Baarlamaanada Soomaaliya
November 12, 2019 (Awdinle Online) – Soomaaliya, oo loola jeedo labadii gobol oo ku midowday Jamhuuriyadda Soomaaliya 1dii Luulyo 1960kii, waxay soo martay marxalado kala duwan tan iyo markii Dawladda Talyaaniga iyo midda Ingiriisku ay billaabeen in ay ku fidaan gobolladan laga billaabo dhammaadkii qarnigii 19aad.
1960kii doorasho ku salaysan isla sharcigii ahaa “The Somaliland (Constitution) Order in Council” ayaa ka dhacday Ex-British Somaliland. Waxaa doorashada ka qayb galay xisbiyadii halkaa ka jiray waxaana lagu soo doortay 33 xubnood oo ka kala tirsanaa saddex xisbi siyaasadeed: SNL: 20 kursi; USP: 12 kursi iyo NUF: 1 kursi.
la soco qeybta 2aad ee qoraaka
Previous articleDhageyso :-Diyaarad sidey gargaar oo ka degtey magaalada Jowhar
Next articleTaliska Xoogga Dalka oo Beeniyey in Hub lagala Baxay Bakhaaradda Wasaaradda Gaashaandhigga